ကုသမှု – BurmeseHearts
BurmeseHearts, Our mission is to bring accessible, affordable, education to Myanmar and empower our students to advance their education and careers. - Online courses marketplace in Burmese language. Becomeastudent, becomeateacher, learn
ရည်ရွယ်ချက် About Us
မေတ္တာ ၊ စေတနာ နှင့် ပညာအရင်းခံမှသာ အောင်မြင်သောအလုပ်
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျန်းမာရေး မကြာခဏဆိုသလို ချူ ချာတတ်တဲ့ ကျွန်မတစ်ယောက် ဆေးရုံသို့ တစ်ခေါက်ရောက်ရပြန်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအလည်ပြန်တုန်း စားချင်တာတွေ စားချင်တဲ့ဆိုင်တွေမှာ စားခဲ့တဲ့ကျွန်မတစ်ယောက် စင်္ကာပူပြန်လာတဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ အန်ပြီးဖျားတာ ရက်သတ္တပတ်တပတ်လုံးလည်းဖျား ၊ မစားမသောက်ချင်လို့ မစားမသောက်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လည်း တပတ်အတွင်း နှစ်ကီလိုလောက်ကျသွားပြီး မသင်္ကာလို့ နီးရာဆေးခန်းကဆရာဝန်ပြတော့…
Myanmar is changing, and Burmese Hearts makes sure education is the heart of it…
CHAT WITH BURMESEHEARTS
Our mission is to bring accessible, affordable, education to Myanmar and empower our students to advance their education and careers.
EXPLORE OUR TOPICS
Myanmar video ကဗျာ ကိုယ်ဝန် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအဆင့်ဆင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်လက်စွဲ ကလေး ကလေးသူငယ် ကလေးသူငယ်များ၏စိတ် ကျန်းမာရေး ခင်ပွန်း ခံစားချက် ချစ်သူ စိတ်ဒဏ်ရာ ဆက်ဆံရေး နားလည်မှု ပညာရေး ဖခင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖွံ့ဖြိုးမှု ဘဝ မိခင် မိဘ မီးနေသည်နှင့် မိခင်များ မျက်ရည် လင်မယား သင်ယူမှု သာယာမှု သားသမီး သန္ဓေတည်ခြင်း သန္ဓေတားခြင်း သန္ဓေသား သန္ဓေသားဖြစ်ပေါ်လာခြင်း အချစ် အချစ်ရေး အတိတ် အထီးကျန် အနာဂါတ် အမှား အာဟာရ အိမ်ထောင် အိမ်ထောင်ရေး မေတ္တာ မွေးကင်းစ အောင်မြင်မှု
© 2022 - BurmeseHearts. All Rights Reserved.
BurmeseHearts - A BH Edtech Co Ltd Company